Archive du 20170414
Minisitry ny fitsarana Matahotra mafy an�ny Bianco ?
Tsy nisy sahy nipoitra teny amin�ny Bianco omaly maraina ireo solontenam-panjakana nandritra ny fanolorana fitaovana momba ny informatika nataon�ny masoivoho frantsay na dia nahazo fanasana aza.
Raharaha Claudine Razaimamonjy Miditra an-tsehatra ny iraisam-pirenena
Mitohy hatrany ny fanohanan�ny sehatra iraisam-pirenena ny Bianco.
Minisitra Rolland Ravatomanga Mampiroaroa saina ny TIM sasany
Maro amin�ireo mpikambana ao anatin�ny antoko Tiako I Madagasikara no miroaroa saina sy velom-panontaniana ankehitriny momba ny minisitry ny rano Rolland Ravatomanga hoe mbola ao anatin�ny antoko TIM ny tenany sa efa HVM ?
Taratasin�i Jean Lasibatra izany ianareo e !
Eny ary ry Jean fa dia ianareo izany no lasibatra a ! Tsy rariny tokoa ny nahazo anareo hatramin�izay e ! Halatra madinidinika ny fanodinkodinana fananam-bahoaka mitentina an-tapitrisany maro.
Boaderozy tany Singapour Bizina vaovaon�ny HVM
Mitohy ny raharaha boaderozy tratra tany Singapour tamin�ny 2014. Amin�izao fotoana dia tsy maintsy manohy ny ezaka isika satria araka ny fahafantarako azy dia mba anisan�ny ady lehibe nataon�ny fitondram-panjakana ity ady amin�ny fanondranana ny hazontsika tany
Ramiaramanana Joseph Mihantsy ady amin-dRavalomanana �
Tsikaritra ho misetrasetra sy mandrangaranga hery mihitsy ny kolonely Ramiaramanana Joseph, sekretera jeneraly eo anivon�ny minisiteram-panjakana misahana ny tetikasan�ny filoha sy ny fanajariana ny tany (M2PATE) amin�ny fandravana trano ataony ankehitriny.
Polisin�ny sisintany Ivato Ara-dal�na ny taratasin-dRtoa Claudine Razaimamonjy
Nanao fanambarana ny kaomisera divizionera Lebiria Rufin Tolozara, tompon'andraikitra voalohany eo anivon�ny polisy mpiambina ny sisintany (PAF) eny Ivato omaly alakamisy 13 aprily maraina fa nahafeno fepetra ny taratasin�i Claudine Razaimamonjy mikasika ny famoahana azy hitsabo tena any ivelany.
Olona manana fahasembanana Nifampizara traikefa tetsy Antsahavola
Manana fahasembanana 20 isa no nandray fiofanana arak�asa tamin�ny rafitra tsy miankina (ONG) C for C hatreto, raha ny fanazavan�ny talen�ny ONG, Sariaka Nantenaina.
Fetin�ny paska Nivadika ho zavatra hafa mihitsy
Fety masina ny fetin�ny paska saingy amin�izao fotoana kosa dia toa efa lasa mivaona amin�izay ny ankamaroan�ny olona, eny fa ny kristianina mihitsy aza no tena maro manao azy.
Hirodana ny fanjakan-jiolahy
! Mihevi-tena ho eo mandrakizay ny mpitondra ankehitriny, ka tsy misaina akory izay haloaky ny ampitso. Tsy misy intsony ny fanjakana tan-dal�na fa efa tena ara-bakiteny ny fanjakan-jiolahy eto amintsika amin�izao fotoana izao.
Befelatanana Narenina ny sampandraharahan�ny Neuro-psychiatrie
Narenina tanteraka ny sampandraharahan�ny Neuro-psychiatrie eo anivon�ny hopitaly Befelatanana.
BANKY BNI MADAGASCAR Mpanohana ofisialy ny ITM taona 2017
Anisan�ny banky iray manohana feno ny fampiroboroboana ny fizahantany eto amintsika ny BNI Madagascar.